June 27, 2020 - Khitalin Media
June 27, 2020 Khitalin Media 0
ရန်ကုန်မြို့က လိမ္မော်ရောင် မြေအောက်သူရဲကောင်းများ ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပင်မမြေအောက်ရေမြောင်းကြီးဟာ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိခဲ့ပြီး စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေကြောင့် မြေအောက်ရေမြောင်းဟာ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်တွေနဲ့ ပိတ်ဆို့နေခဲ့ပါတယ် … အဲ့ဒီလို အမှိုက်ပိတ်ဆို့နေမှုတွေကိုလည်း ဆယ်ယူရှင်းလင်းခြင်းမရှိတာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီလို့လည်း သိရပါတယ် … အခုတော့ အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်တွေကို ရှင်းလင်းမယ့် လိမ္မော်ရောင်သူရဲကောင်း(ဝါ)သန့်ရှင်းရေးလုပ်သားတွေ […]
မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ
ကျွန်တော်ဇနီး သွေးကင်ဆာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကနေထွက်ခွာသွားတာ ခုဆို (၃)နှစ် ကျော်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အိမ်မှု့ကိစ္စလုံးဝမလုပ်တက်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကိုထားခဲ့ရတာ သူဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းနည်းနေမလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘနှစ်ပါးစလုံးနေရာကနေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မနက်စောစောခရီးထွက်ဖို့ရှိတော့ ခလေးအတွက် ဘာမှမပြင်ဆင်ပေးရပဲအိမ်ကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ မနေ့ညက ထမင်းကြမ်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်ထားခဲ့ပေးပြီးအိပ်ရာကမနိုးသေးတဲ့ သားလေးကို ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ […]
ညီမလေး ဇာခြည်မြင့်မြတ် ရဲ့ လွမ်းစရာ video ဖိုင်လေး
ညီမလေး ဇာခြည်မြင့်မြတ် ရဲ့ လွမ်းစရာ video ဖိုင်လေး ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ထဲတက်သွားပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကောင်မလေး ဇာခြည်မြင့်မြတ် နောက်ဆုံး update ပါ ပျောက်တဲ့မနက် (၂၅-၆-၂၀၂၀) မနက်ဘက် ရန်ကုန်မှာရှိနေရာကနေ မိသားစုနဲ့အတူ ကားနဲ့ပြန်လာပါတယ်။ဘားအံကို နေ့လည်မှာရောက်ရှိပါတယ်။ဘားအံတက္ကသိုလ်မှာ ဂုဏ်ထူးတန်း […]
ဘားအံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူရဲ့ အလောင်းကို ချောက်ထဲကနေ သယ်ယူလာပြီးဆေးရုံပို့ စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ … .
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း” ၁။ လေးညှင်းပွင့် လေးညှင့်ပွင့်ဆီ ၂ စက် ၃ စက် နဲ့ နှမ်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁/၄ ပုံထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဝါဂွမ်းလေးနဲ့ တို့ပြီး သွားနားမှာ ကပ်ပေးထားပါ။ ညအိပ်ယာမဝင်ခင်တိုင်းလုပ်ပေးပါ။လေးညှင်းဆီကို မခဏခဏမသုံးဖို့လိုပါတယ်။ ၂။ ဆား […]
ကျောင်းသူမလေးအလောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ တောင်အောက်ဆင်းပြီး သွားဆည်ယူနေတဲ့ Live (ရုပ်/သံ) ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမလေးအလောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ တောင်အောက်ဆင်းပြီး သွားဆည်ယူနေတဲ့ Live (ရုပ်/သံ) ဖြစ်စဉ်က………….. မနေ့ကရရှိလာသော ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့ရှိသည့်နေရာသို့ သေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် ယနေ့မနက် (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မာဃလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ (၃) ဖွဲ့ဦးစီးပြီး တခြားသော […]
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကောင်မလေး ဒရုန်းနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါပြီ….
ဇွဲကပင်တောင်မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကောင်မလေးရဲ့ အလောင်းကို ဒရုန်းနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါပြီ…. ကောင်မလေးအား ကျောက်တောင်တစ်နေရာတွင် Drone နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါပြီ…. သော့တွေ့ရှိသောနေရာမှ အနက်ပေ ၃၀၀ တွင် တွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲတင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ….။ အနက်ပေ ၃၀၀အောက် ချောက်ကမ်းပါး အောက်မှာပါ…။Sayar Lone ပျောက်ဆုံးနေသော သတင်း မနေ့ကရရှိလာသော […]
ဇွဲကပင်တောင်တက်ရင်း ထူးခြားစွာ ပျောက်ဆုံးသွားသော မိန်းကလေးအားအင်တိုက်အားတိုက် စွန့်စား ရှာဖွေနေမှု (ရုပ်သံ)
မနေ့ကရရှိလာသော ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့ရှိသည့်နေရာသို့သေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် ယနေ့မနက် (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမြို့နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မာဃလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ (၃) ဖွဲ့ဦးစီးပြီး တခြားသော အဖွဲ့များနှင့်ယနေ့ထပ်မံ ပူးပေါင်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကအကူအညီတောင်းလို့ Drone အဖွဲ့တွေကလဲ ကူညီရှာဖွေဖို့ ရောက်ရှိလာကြပါပြီး။ သတင်းထူးများရှိခဲ့လျှင်..သိရှိတာနဲ့မှန်ကန်သောသတင်းများသာတင်ပြပေးပါမည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေး၏ဖြစ်စဉ်နှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စဉ်အကျဉ်း (လူတွေကမသိတော့ သို့လောသို့လောထင်မြင်ယူဆချက်တွေမဖြစ်ကြဖို့ ဒီစာလေးဖတ်ပေးကြပါ) အမည် – ဇာခြည်မြင့်မြတ် အသက် […]
ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေး၏ဖြစ်စဉ်နှင့် လူတွေကမသိတော့ သို့လောသို့လောထင်မြင်ယူဆချက်တွေမဖြစ်ကြဖို့ ဒီစာလေးဖတ်ပေးကြပါ…
မနေ့ကရရှိလာသော ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့ရှိသည့်နေရာသို့ သေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် ယနေ့မနက် (၂၇.၆.၂၀၂၀)ဘားအံမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မာဃလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ (၃) ဖွဲ့ဦးစီးပြီး … တခြားသော အဖွဲ့များနှင့်ယနေ့ထပ်မံ ပူးပေါင်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကအကူအညီတောင်းလို့ Drone အဖွဲ့တွေကလဲ ကူညီရှာဖွေဖို့ ရောက်ရှိလာကြပါပြီ။သတင်းထူးများရှိခဲ့လျှင်..သိရှိတာနဲ့မှန်ကန်သောသတင်းများသာတင်ပြပေးပါမည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေး၏ဖြစ်စဉ်နှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စဉ်အကျဉ်း (လူတွေကမသိတော့ သို့လောသို့လောထင်မြင်ယူဆချက်တွေမဖြစ်ကြဖို့ ဒီစာလေးဖတ်ပေးကြပါ) အမည် – ဇာခြည်မြင့်မြတ် အသက် – […]
ဟေတုပစ္စယော တစ်လုံးတည်းဖြင့် ဘဝကူးကောင်းခဲ့သူ မိုးညှင်းဆရာတော်ကြီးကျောင်းကို ဥပုသ်စောင့်လာတဲ့ အထဲက စာမတတ် ပေမတတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အဖွားအိုကြီးတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကြီးကို ပုတီးစိပ်သင်ပေးဖို့ လျှောက်ထားသတဲ့— ဒီတော့ ဆရာတော်ကြီးက အဖွားကြီး စာကလည်း မတတ် ဉာဏ်ကလည်း ထိုင်းမယ့်ပုံဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော့ဘူး “ဟေတုပစ္စယော စိပ်” လို့ […]